Rikoorka Laydhka biyuhu
Suurawdo biyuhu la waaya'aragnimo
Suurawdo biyuhu la tube LED
Integrated LED suurawdo biyaha
Body Qaybiyo LED suurawdo biyaha
Body Qaybiyo LED suurawdo biyaha Iyadoo sensor
Baxsan Louver mudnaan la Tube LED
Louver dusha mudnaan la Tube LED
Baxsan LED Louver suurawdo
Batten Rakibidda la Tube LED
LED Batten suurawdo
LED Dustproof suurawdo
Baxsan Panel LED la Back Light
Dusha LED Panel la Back Light
T8 LED Alu-caaga Tube
waxaa la aasaasay sanadkii 2004 oo ku yaal Longshan Town, Cixi City, Zhejiang, Shiinaha, meel u dhow dekedda Ningbo. Waxaana ay ku aaddan meel ka mid ah 30,000 m 2 , wuxuu leeyahay 350 oo shaqaale. Waxaan nahay xirfad saaraha qalabka iftiiminta diiradda on cilmi, horumarinta iyo hal-abuurka ka mid ah waxyaabaha kala duwan ee nalalka, teknoolajiyada iyo xalalka, waxaana lagu qalabeeyey awood-soo-saarka dhafan for design & horumarinta, qaybo processing, shirka soo saarka iyo iwm
Ku tiirsan faa'iido wanaagsan ee kooxdu warshadaha, iyo fikradda fiican maamulka iyo qaabka sahaydu, faa'iido kharashka keentay ayaa loo abuuray in industry ee.
Dhagno tayo sare leh oo qiimo jaban, Waxaan ku siin macaamiisha taxane dhamaystiran oo alaabta nalalka leh ugu fiican ratio waxqabadka qiimaha, sida nalalka injineernimada iyo waxyaabaha nalalka loo isticmaalo dadka rayidka ah. Waxaan kula kulmi kartaa shuruudaha ugu sareeya ka macaamiisha, xalliyaan dhibaatooyinka farsamada iyo in la abuuro qiimo u gaar ah si ay u noqdaan lammaanaha ugu wanaagsan ee macaamiisha badan.
Faa'iideysanaya taageerada ugu fiican farsamo, tayada badeecada ayaa lagu ansixiyey dunida. Waxaan soo maray ee ISO9001: 2008 Certification Management System Tayo. wax soo saarka ayaa ka gudubtay caddeyn ah CE (LVD / EMC), Sudee, UL, CETL, ka imanaysa iyo iwm
Currently, our ganacsi ku faafay oo dhan Shiinaha iyo suuqyada waaweyn ee dunida, alaabooyinka waxaa laga dhoofiyey in ka badan 30 dal iyo gobollada, sida Europe, USA iyo koonfur bari Asia, iyo ku guuleysan ammaanay ka users gudaha iyo dibadda by tayo fiican leh iyo qiimaha tartan rasmi ah.
Sida lammaanahaaga lagu kalsoonaan karo oo lagu kalsoonaan karo, waxaan u hoggaansamaan doonaa in ballamada, sii hagaajinta, iyo had iyo jeer qaado siinta alaabta qaab wanaagsan iyo adeegga buure "sida masuuliyad.
Cinwaanka: Qindu Road, East-Cixi, Zone Warshadaha, CiXi City, Zhejiang